भुईकटहरकाे बुवाले घर हेर्दा दङ्ग भए, यत्राे ठूलाे टिभी अाउदै घरमा, हुदैछ भब्य हस्तान्तरण कार्यक्रम (भिडियो)
Posted on November 28, 2018 November 28, 2018 by Npnews
बाल गायक अशाेक दर्जी काे क्रेज बढेसंगै उस्काे अत्यन्तै मिलनसार साथि भुईकटहरकाे घर बन्ने पनी कुरा चलेकाे थियाे । अाज अाएर याे सपना सकार बनेकाे छ । समाजसेवी पूर्ण वाईवाकाे संयाेजकताेमा बनेकाे घर अत्यन्तै सुन्दर छ । देश तथा विदेशमा छरीएर रहनुभएका नेपाली भाषीहरुले देखेकाे सपना साँच्चीकै साकार भएकाे छ । घर निर्माण भए संगसंगै हस्तान्तरणकाे कुराले बजार तातेकाे थियाे । मंसीर १२ गतेलाई शुभ साहित हेरी घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय गरीएकाे छ । स्थानिय सरकार लगायत स्थानिय कलाकारहरुकाे उपस्थितीमा हुने उक्त कार्यक्रममा धिमाल जातीले मैलीक नाँच पनी देखाउने भएकाे छन् । संगसंगै भुईकटहर र उस्काे दिदिले पनी नृत्य देखाउने छिन् । बाँकि भिडीयाेमा ।
नवलपरासीमा फेला परिन आमा बुबाले छाडेका २३ बर्षकी सम्भवत नेपालकै सानी नानी (भिडियो सहित)
नवलपरासी । नवलपरासी जिल्लाको एक बिकट गाउमा एक २३ बर्षकि सानी बालिका फेला परेकी छिन । बि.स २०५२ सालमा जन्मेकि दिव्यानी मगर जम्मा ३३ इन्चका मात्रै छिन् ।
उनलाई आमा बुबाले छाडेर गएका हुन् । आफन्तको घरमा छाडेर उनका आमा बाबु गएका हुन् । हेर्नुहोस पुरा भिडियो :
के रबिना बादीले किड्नी बेचेकै हुन् त ? रबिना वादीको डाक्टरद्वारा स्वास्थ्य जाँच, भयो सबै खुलासा (भिडियो)
तर रबिनाले किड्नी बेचेकै हो त ? भनेर विभिन्न व्यक्तिहरुले शंका उपशंका गरेको बेला रबिना बादी डाक्टरसंगै मिडियामा आएर प्रष्ट पारेकी छिन । हेर्नुहोस पछिल्लो भिडियो :
पैसा कमाएर दुबईबाट फर्कदा श्रीमतीको पेटमा परपुरुषको ६ महिनाको गर्भ , विदेशिएका नेपालीले हेर्नै पर्ने भिडियो
काठमाडौँ । बैदेशिक रोजगारीले यमलाल अधिकारीको परिवार भाँडिएको छ । बैदेशिक रोजगारीको लागि दुबई गएका बेलमा उनको नेपालमा रहेको परिवार भाँडिएको हो । श्रीमती जमुना पाण्डेले घर छोडेर हिंडेको यमलालले बताएका छन् ।
बिगत चार महिनादेखि जमुना आफुसँग नभएको उनले बताए । उनी दुबईमा रहँदा पर्वतका लोकनाथ आचार्य नाम गरेका पुरुषसँग जमुना गएको उनको दाबी छ । जमुनाले पाँच बर्षीय छोरी किसमस अधिकारीलाई पनि सँगै लगेकी छन् ।
सम्बन्ध बिच्छेद गर्न आफु तयार रहेको बताउँदै उनले उनीहरु अहिले भारतमा लुकेर बसेको बताएका छन् । जमुनासँगै गएका लोकनाथले सम्बन्ध बिच्छेदको लागि अझै एक बर्ष कुर्न भनेको उनले बताएका छन् । भिडियो हेर्नुहोस :
हराएको दश वर्षपछि मुत्युको खबरले सिङ्गो गाउँ पनि चिन्तित
बागलुङ, ११ मङ्सिर । रत्ना बस्नेतसँग आशाको त्यान्द्रो बाँकी थियो, “कतैबाट श्रीमान् टुप्लुक्क आइपुग्नु हुन्छ कि ?” करीब दश वर्षदेखि बाटो कुरेर बसिरहनुभएकी श्रीमती रत्नासँग न अब आशा नै बाँकी रह्यो, न श्रीमान् ।
छोरी चिनाको बिहे भइसकेको छ भने छोरा राम पोखरामा पढ्दै छन् । पैसा कमाउन विदेशीनुभएका श्रीमान्को उतै निधन भएपछि उहाँको जीवनमा ठूलो विपद् आइलागेको छ । रासस
बासी भात फाल्ने गर्नु भएको छ ! कहिलेपनि नफाल्नुहोस,बासी भात खानुको यस्ता छन् फाईदा
सबैको घरमा प्राय: जसो भात अलि धेरै पकाउने चलन छ। जुन सबैले खाना खाइसकेपछि बाकि रहेको भातलाई हामी बासी भात भन्ने गरिन्छ । र त्यसलाई पुन: खानेले खान्छन र फाल्नेले फाल्छन अथवा अरुलाई खुवाउछौ ।
तर, अबदेखि यदि घरमा पकाएको भात बढी भयो भने त्यसलाई फ्याक्ने काम नगरौँ । किनकि बासि भात खानाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हुने फाइदाको बारेमा तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ । राति पकाएको भात उब्रेको छ भने त्यसलाई नफ्याकि माटोको भाडामा रातभर पानीमा राखिदिनुस । त्यो भातलाई काँचो प्याज मिसाएर बिहानको ब्रेकफास्टमा खान सक्नु हुन्छ । बासि भात तपाईले कहिल्यै नखाएपनि यसले तपाईलाइ धेरै नै फाइदा हुन्छ ।
बासी भात खानुको फाईदा जानीराख्नुहोस:
१. बासी भात आफैँमा एक चिसोयुक्त खाना हो । यदि तपाईले बासि भातलाई सहि तरिका अपनाएर खानुभयो भने तपाईको शरिरको तापक्रम नियन्त्रणमा रहन्छ ।
२. भातमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ, जसले कब्जियतको समस्याबाट छुट्कारा दिलाउछ ।
३. बासि भातले तपाई दिनभर आफूलाई ताजा बनाइ राख्न सक्नु हुन्छ । जसले गर्दा तपाईलाई दिनभर काम गर्नमा इनर्जी प्राप्त हुन्छ ।
४. यदि तपाई अल्सरको समस्याले पीडित हुनुहुन्छ भने हप्तामा तीनदिन बासि भात खाने गर्नुस । यसले तपाईको घाउ चाँडै निको हुन्छ ।
५. यदि तपाइलाई चिया र कफि पिउने बानि छ भने बिहान उठेर बासि भात खानाले यो बानि छुट्न सक्छ ।
रिस खा आफु बुद्दी खा अरु भन्ने चलन विविधता नै छ । रिस उठ्ने बानि स्वास्थ्याको लागि पनि नराम्रो पक्ष हो। हाम्रो दैनिक जिवनका स-साना बानीहरु पनि मृत्युको कारण बन्न सक्छन् । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानले धेरै रिस उठ्ने मानिसहरुको मृत्यु छिटो हुने गरेको पुष्टि गरेको छ ।